(tonga teto avy amin'ny Vondrom-piteny soahily)
Ny fiteny soahily (amin'ny fiteny soahily: kiswahili) dia fiteny ao amin'ny vondrom-piteny bantoa izay tenenina eo amin'ny faritra atsinanan'i Afrika, izay manafangaro teny afrikanina sy fiteny arabo.
Ao amin'ny teny soahily dia ahitana fiovaovàna araka ny faritra. Ny atao hoe "fiteny soahily ofisialy", izay fampiasan'i Kenia ary Tanzania ary any Oganda dia teny soahily "tatsinanana", ary ny teny soahily tenenina any Oganda ary any amin'ny faritra atsinanan'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, dia azo lazaina fa fiteny soahily tandrefana. Ao Kenia indray dia ahitana ny teny soahily mifangaro amin'ny teny anglisy izay antsoina hoe "sheng". Io fomba fitenenana soahily io dia ampiasain'ny tanora matetika eny amin'ny tanàn-dehibe.
Na dia izany aza, mifankahazo avokoa ireo mpiteny soahily amin'ny alalan'izay teny soahily ofisialy izay.
Ny fiteny soahily ("fitenin'ny olona amorontsiraka") dia fiteny banto manana voambolana maro dia maro avy amin'ny fiteny arabo, noho ny fifandraisann'y mponina tompontany amin'ireo mpivarotra arabo mandalo eo amin'ny amorontsirak'i Zanja (Zanj), misy voambolana avy amin'ny fiteny persana, alemana, portogey, anglisy ary frantsay koa ao amin'ny fiteny soahily.
Ankehitriny ny isan'ny mpiteny soahily dia mahery ny dimampolo tapitrisa izay miparitaka eraky ny faritra atsinanan'i Afrika : i Kenia, Tanzania, ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô (tsy teny ôfisialy) ary i Kômôro. Teny ôfisialy ary tenim-pirenen'ireo firenena ireo ny fiteny soahily. I Oganda, firenena izay manana ny teny anglisy ho teny ôfisialy, dia mampianatra fiteny soahily nanomboka tamin'ny taona 1992, ary tamin'ny 2005 ilay fiteny dia lasa nivadika ho fiteny ôfisialy, mba hanomanana ny Federasiônan'ny Afrika Atsinanana. Hain'ireo mponina mipetraka ao Kômôro sy Borondỳ ary Roanda ny miteny soahily.
Amin'ny ankapobeny, ny fiteny kisoahily dia fiteny bantò tenenina ao amin'ny faritra afovoany ary atsinanan'i Afrika. Ireo firenena mampiasa azy amin'ny lafiny ofisialy (izany hoe mampiasa ilay fiteny amin'ny lafin'ny fandrindrana na amin'ny lafin'ny fifandraisana amin'ny vahoaka) dia i Tanzania sy i Oganda ary i Kenia. Ampiasaina koa ny fiteny soahily any avaratr'i Môzambika sy amin'ny faritra atsinanan'i Repoblika Demôkratikan'i Kongo, fa tsy ôfisialy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_soahily&oldid=999442"
Voaova farany tamin'ny 29 Desambra 2020 amin'ny 14:50 ity pejy ity.